१२ वर्ष अगाडी भाडाको एउटा कोठामा बस्ने नेहाको अहिले छ बंगला, भावुक हुदै लेखिन यस्तो पोस्ट ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रिय फोटो फिचर१२ वर्ष अगाडी भाडाको एउटा कोठामा बस्ने नेहाको अहिले छ बंगला, भावुक हुदै लेखिन यस्तो पोस्ट !
काठमान्डौ , बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कडलाई नचिन्ने सायद कमै होला । उनको आवाजको कारण उनलाई अहिले पुरै संसारले चिन्छन् । नेहा कक्कडले सोशल मिडियामा एक पोस्ट श्येर गरेकी छन् , जुन अहिले चर्चामा रहेको छ। नेहाले नयाँ घरको दुई तस्विर शेयर गरेकी छन् । यी तस्विरलाई शेयर गर्दै नेहाले आफ्नो १२ वर्षको संघर्षको कहानी बताएकीछन् । नेहा कक्कड सिनेमा जगतमा आउनुभन्दा पहिला एक कोठामा भाडामा बस्थिन् । यधपी अहिले उनीसँग शानदार घर रहेको छ ।आफ्नो पुरानो दिनलाई सम्झिदै नेहाले इंस्टाग्राममा दुई तस्विर शेयर गरेकी छिन् ।
एक तस्वीर नेहाको पुरानो घरको हो, जहाँ उनी जन्मेकी थिइन् ।नेहा कक्कडले लेखेकी छिन्, ‘यो त्यो बंगला हो जुन अहिले हाम्रो छ । दोस्रो घर ऋषिकेश जहाँ म जन्मिएकी थिए ।त्यस घरमा हामी कक्कड परिवार एउटा कोठामा बस्थ्यौ । त्यहाँ मेरी आमाले एक टेबल राखेकी थिइन, जुन हाम्रो किचेन थियो । त्यो घर हाम्रो आफ्नै थिएन । हामीले भाडा तिर्थ्यौ । अहिले जब म एउबटै शहरमा मेरो आफ्नै यस बंगलालाई देख्छु तब म सधैँ भावुक हुन्छु ।’ नेहाले अगाडी लेखिन् ,”मेरो परिवारलाई धन्यवाद ! आमाबुबा , हजुरआमा र मेरो शुभचिन्तकलाई पनि ।’
नेहाको यस पोस्टमा थुप्रै स्टारले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कमै मान्छेलाई यो थाहा छ कि सिनेमा जगतमा आउनुभन्दा पहिला नेहा र उनको दिदि र दाई भजन गाउथे ।‘इन्डियन आइडल’ मा प्रतिस्पर्धीको रुपमा आएपछि नेहालाई सफलता मिल्यो र त्यसपछि उनले सफलताको सिडी चढिन् । नेहाले ‘इंडियन आइडल’ मा प्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिएपछि म्यूजिक एल्बम निकालिन जसको नाम ‘नेहा द रक स्टार’ थियो । जुन २००८ सालमा आएको थियो । त्यसपछि उनलाई सिनेमा जगतमा काम मिल्न थाल्यो ।
अमेरिकामा दुई नेपाली घरभित्रै मृ’त फेला, को’रोना आशंका
९६६०७ पटक पढिएको